नायिका वर्षा सिवाकोटी हट तस्विरहरु
नायिका वर्षा सिवाकोटी एक नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित नायिका हुन् । उनी पछिल्लो समय निकै फिल्ममा व्यस्त छिन् । उनले आफ्नो केहि हट तस्विरहरु शेयर गरेकी छन् । वर्षाले सार्वजनिक गरेका केही तस्वीरमा उनी विकिनी अवतारमा देखिएकी छिन् । एक तस्वीरमा वर्षा लेख्छिन्–‘कहिलेकाही, यो ठिक छ ।’ वर्षा अहिले चलचित्र ‘चालबाज’मा काम गरिरहेकी छिन् ।
बागलुङ, १५ पुस । चर्चित गायक प्रकाश सपुत आइतबार गृहजिल्लामा सुनिनुभयो । बागलुङ महोत्सवका अवसरमा उहाँलाई बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले मञ्च उपलब्ध गराएको थियो । सपुतको गायकीले बागलुङ महोत्सव सङ्गीतमय बन्यो । हजारौँ दर्शक एकसाथ झुमे, रमाए । आफ्नो डेढ घण्टे प्रस्तुतिमा सपुतले चल्तीका नौ गीत गाउनुभयो । शुरुमा गम्भीर भावका गीतसहित प्रस्तुत हुनुभएका उहाँले […]
काठमाडौँ, १३ पुस । बलिउडका चर्चित नायक सलमान खानका पारखीका लागि उहाँको चर्चित ब्राण्ड नेपालको बिइङ ह्युमनक्लोथिङको ‘रिब्रान्डिङ’ गरिएको शो–रुम दरबारमार्गमा खुलेको छ । नेपालका लागि बिइङ ह्युमनक्लोथिङको आधिकारिक बिक्रेता वस्त्र इन्क प्रालीले दरबारमार्गको स्टोरमा संस्थापक सलमानखानको जन्मदिनका अवसरमा ‘रिब्रान्डिङ’ हुरु गरेको कम्पनीले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । केही समय आन्तरिक समस्याका कारण बन्द रहेको […]
काठमाडौँ, १३ पुस । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका चित्रकारहरुले एकै ठाउँमा बसेर अनुभव आदानप्रदान र सम्बन्ध विस्तार गरी चित्रमार्फत संस्कृति साटासाट गरेका छन् । काठमाडौँको नेपाल कला परिषद्मा भेला भएका उनीहरुले प्रत्यक्ष चित्रकला कार्यशालामार्फत संस्कृतिको आदानप्रदान गरेका हुन् । भारतबाट सहभागी ११, बङ्गलादेशबाट १० र नेपालका पाँच कलाकारका ६० भन्दा बढी चित्र प्रदर्शनीका क्रममा उनीहरुले […]
किन अभिनेता सलमान खानलाई ‘डब्लु डब्लु इ’ च्याम्पियनको उपाधि ?
एजेन्सी, बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई विश्व रेसलिङ इन्टरटेन्मेन्टले चाँडै नै कस्टमाइज्ड डब्ल्यू डब्ल्यू ई च्याम्पियनशीप बेल्ट दिएर सम्मानित गर्न लागेको छ । भारतीय संचार माध्यमका अनुसार डब्ल्यूडब्ल्यूईले दबंग सिरिजको तेस्रो फिल्म ‘दबंग थ्री’लाई सेलिब्रेट गर्नका लागि यस्तो गर्न लागेको हो । ‘दबंग थ्री’ सिनेमा घरमा रिलिज भइरहेको छ ।
बलिउड अभिनेत्री करिश्मा तन्नाको हट लुक्स (फोटो फिचर)
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री करिश्मा तन्नाले हालै आफ्नो माल्दिभ्स विदाका तस्वीर शेयर गरेकी छिन् । करिश्मा माल्दिभ्समा आफ्नो ३६ औं जन्मदिन मनाउन पुगेकी हुन् । फोटोमा करिश्माको ट्याटु पनि प्रस्ट देखिएको छ ।
अभिनेत्री रकुल प्रित सिंहको हट लुक्स (तस्वीरहरु)
एजेन्सी, अभिनेत्री रकुल प्रित सिंह आफ्नो इन्स्टाग्राममा फोटोहरु शेयर गरेकी छिन् । उनले फोटोको क्याप्सन लेखेकी छिन् ‘माथि आकाश, तल बालुवा, भित्र शान्ति । चारैतिर खुसी नै खुसी ।’ एक सेल्फी पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन् ‘आफ्नो सेल्फीमा विश्वास गर्नुस् ।’ मूल रुपले तेलुगु र तमिल अभिनेत्री रकुल केही कन्नड र हिन्दी फिल्ममा पनि देखिएकी […]
अभिनेत्री काजल अग्रवालको बोल्ड बिकिनी (फोटो फिचर)
एजेन्सी, दक्षिण भारतीय अभिनेत्री काजल अग्रवाल अहिले आफ्नो इन्स्टाग्राममा विदाका केही तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन् । इन्स्टा स्टोरीमा पनि काजलले माल्दिभ्समा क्रिसमसको लागि तयार गरिएको लाइटिङको दृश्य देखाएकी थिइन् ।
केकी अधिकारी यस्तो लुक्समा
केकी अधिकारी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एक सक्रिय र चर्चित नायिका हुन् । अधिकारीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निकै धेरै फिल्महरु खेलिसकेकी छन् । उनी एक सफल र चर्चित नायिका पनि हुन् ।
इलियानाले भनिन्, ‘म मेरो शरीरलाई झनै बढी माया गर्न थालेकी छु'(फोटोसहित)
एजेन्सी, नायिका इलियाना डीक्रुजले सामाजिक संजालमा आफ्नो फोटो शेयर गरेकी छन् । इलियाना भन्छिन्–‘मलाई मेरो शरीरलाई यो तरिकाले स्विकार गर्न पहिले खुबै समस्या थियो । तर, म दावाका साथ भन्न सक्छु कि अब म मेरो शरीरलाई झनै बढी माया गर्न थालेकी छु र सम्मान पनि गर्छु ।’
आलिया भट्ट बनिन् सन् २०१९ को एसियाकै सबैभन्दा सेक्सी महिला
एजेन्सी, सन् २०१८ मा यो सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेकी दीपिका पादुकोणलाई पछि पार्दै बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट सन् २०१९ को एसियाकै सबैभन्दा सेक्सी महिलाको रुपमा छनोट भएकी छन् । दीपिका पादुकोणले यो पटक दोस्रो स्थान हासिल गरेकी छन् । सेक्सी महिलाको यो सूचीमा टेलिभिजनकी कलाकार हिना खान तेस्रो र महिरा खान चौथो स्थानमा छन् ।
अभिनेत्री इलियाना डिक्रुजले हट तस्बिर सेयर गरेपछि चर्चामा, हेर्नुहोस तस्बिर
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री इलियाना डिक्रुजले आफ्ना हट तस्बिर सेयर गरेपछि चर्चामा छिन् । इलियानाका यी तस्बिरमा फिल्म ‘मैं तेरा हिरो’ मा उनका कोस्टार रहेका वरुण धवनले आकर्षक कमेन्ट गरेका छन् । तस्बिरको साथमा उनले क्याप्सन लेखेकी छन्, ‘वेटिङ फर द सन टु कम आउट।’ इलियानाको यो तस्बिरमा वरुणले थन्डर (चट्याङ) को संकेत पोस्ट गरेका छन् […]
यस्तो भिडियोले गर्दा अभिनेत्री रविना टन्डन भाइरल
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री रविना टन्डनको सेक्सी भिडियोका कारणले अहिले भाइरल भएकी छन् । भिडियोमा उनी नीलो रङको सेक्सी ड्रेसमा देखिएकी छन् । रविनाको भिडियो पुरानो हो तर अहिले भाइरल भएको जनाइएको छ ।
अभिनेत्री आलिया भट्ट फोब्र्सको आठौँ स्थानमा, भट्टको कमाई कति ?
एजेन्सी, फोब्र्स म्यागजिनले भारतको १०० हस्तिको सूचि प्रकाशित गरेको छ । यसमा ५९ करोड २१ लाख कमाईसहित अभिनेत्री आलिया भट्ट आठौँ स्थानमा छिन् भने दीपिका ४८ करोड रुपैयाँ कमाईसहित दशौँ स्थानमा छिन् ।